मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद फैसला: अब के हुन्छ सांसद पद ? | CHALKHEL.COM
Home पत्रपत्रिकाबाट मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद फैसला: अब के हुन्छ सांसद पद ?
चक्रे मिलनमाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोग लागेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई पाँच वर्षअघिकै पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला अन्तिम हुने भएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । पुनरावेदनले ०६९ मा मनाङेलाई पाँच वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । सो आदेशलाई अन्तिम मान्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थिएन । मनाङे पनि पुनरावेदनको फैसलामा चित्त बुझाएर बसेका थिए ।
Previous articleयसकारण गर्दैछन् नर्सहरुले आन्दोलन
Next articleकाठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकः फिल्डमा के गर्दै छ सेना ?